Umhlaba wokuhlala Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa ngaphakathi Kolkata, West Bengal
Real Estate Listings: Land lots Residential Land West Bengal Kolkata
Umhlaba wokuhlala ngaphakathi Kolkata
Umhlaba wokuhlala ngaphakathi West Bengal
1 - 10 ka 185 Uluhlu
It has an area of 720 sqft The property is available at a price of Rs 1 20 lac Its entry is southeast facing The society is well connected by different modes of transportation The time you'll spend here will become the greatest moment of your life that will also help you to relieve, relax & evok...
Ipapashwe ngu Southern Valley
umbono Umhlaba wokuhlala ipapashiwe 3 weeks ago
A plot is available at a prime location in MAK Group Southern Valley It has an area of 1441 sqft and is priced at Rs 2 40 lac It has children's play area as well as school The project also has swimming pool, landscaped gardens, water supply, 24 x 7 security, club house, cctv, multipurpose room and i...
It has an area of 720 sqft The property is available at a price of Rs 1 20 lac The amenities include internet/wi-fi, children's play area, swimming pool, school, 24 x 7 security, cctv, landscaped gardens, multipurpose room, club house and shopping mall It is facing south direction It is well connect...
This plot is situated in Vriddhi Fresco Fountain City, Joka, Kolkata It has an area of 1440 sqft The property is available at a price of Rs 2 40 lac The amenities include gymnasium, maintenance staff, club house, children's play area, power backup, jogging track, swimming pool, rain water harvesting...
Ipapashwe ngu Md Sajid
RASPUNJA CITY is a housing project on a 120 bigha land area, located on the sanctioned 42 ft wide Raspuja Budge Budge Road Which is just 2km from Bakrahat road We are providing extra amenities such as Water supply, Electricity, Drainge, Drinking Water There are ample transport facilities available l...
Ipapashwe ngu Om Developers
Freehold residential township project located in Santoshpur More crossing, Barasat with all besic amenities including 0 % emi payment system For more details call us
Ipapashwe ngu Uninest Properties
A plot is available at a prime location in Barasat It is north facing property It is well connected to the city areas The time you'll spend here will become the greatest moment of your life that will also help you to relieve, relax & evoke a great sense of happiness Contact us for more details
Our freehold residential township project located in Thakurpukur, Near Rasapunja More Beside Nahazari Road with all besic amenities which is 0 % emi facility For more information call us
A plot is available for sale in Barasat, Kolkata It has a salable area of 2160 sqft and is available at a price of Rs 486 per sqft It is facing north direction It is situated in the proximity of all the important facilities The time you'll spend here will become the greatest moment of your life that...
Residential Land For Sale and For Rent in Kolkata, West Bengal
I-Kolkata (okanye, i-Bengali: [ˈkolˌkata] (mamela), ekwabizwa ngokuba yiCalcutta, igama elisemthethweni kude kube ngo-2001) yintloko-dolophu yelizwe laseIndiya eliseNtshona Bengal. Ngokobalo lwabantu lwaseIndiya lowama-2011, sesisixhenxe isixeko esinezona ndawo zininzi eIndiya; esi sixeko sinabemi abazizigidi ezi-4,5, ngelixa abantu abaphantsi bezise inani elipheleleyo kwizigidi ezili-14, lisenza indawo yesithathu yabona bantu baninzi eIndiya. I-Kolkata Megalopolis yindawo ejikeleze iKolkata Metropolitan idolophu enabantu abongezelelweyo. Ifumaneka kunxweme olusempuma loMlambo i-Hooghly malunga neekhilomitha ezingama-80 (umgama ongama-50 mi) ngasentshona komda kunye ne-Bangladesh, iziko eliphambili lezorhwebo, inkcubeko kunye nezemfundo eMpuma India, ngelixa iPort of Kolkata sesona sikhululo sisebenzayo saseIndiya eyona ndawo iphambili kumazibuko emilambo. Esi sixeko sabizwa ngokuba "sisiXeko soLonwabo" sithathwa ngokubanzi njenge "dolophu yenkcubeko" yaseIndiya kwaye ngonyaka ka-2019, abathandathu bakaNobel Laureates banxulunyaniswa nesixeko. Uqikelelo lwakutsha nje lwezoqoqosho lweMimandla yeNqila yeKolkata sele lisusela kwi-60 yeedola ukuya kwi-5 yeebhiliyoni zeedola (i-GDP ehlengahlengisiweyo yokuthenga amandla) okwenza ukuba ibe yeyesithathu kwimveliso yesixeko e-India, emva kweMumbai neMelhi.Ngasekupheleni kwenkulungwane ye-17, ezi lali zintathu zazichazayo. ICalcutta yalawulwa yiNawab yaseBengal phantsi kweMughal suzerainty. Emva kokuba iNawab inike iNkampani ye-East India imvume yokuthengisa ngo-1690, le ndawo yaphuhliswa yiNkampani yaba sisikhundla esomeleleyo sokuthengisa. INawab Siraj ud-Daulah yahlutha iCalcutta ngo-1756, kwaye iNkampani ye-East India iphinde yayithatha kunyaka olandelayo. Ngo-1793 inkampani yase-East India yayinamandla okuphelisa i-Nizamat (umthetho wasekhaya), kwaye yathatha ubukhosi obugcweleyo bengingqi. Ngaphantsi kolawulo lwenkampani, kwaye kamva phantsi kweBritish Raj, iCalcutta yasebenza njengekomkhulu leendawo eziphethwe yiBritane eIndiya de kwangowe-1911, xa imeko yakhona engathandekiyo, idityaniswa nokukhula kobuzwe e-Bengal, kwakhokelela kutshintsho lwedolophu ukuya eNew Delhi . ICalcutta yayiliziko lombutho wokuzimela waseIndiya; ihlala ilusizi kwezopolitiko zeli xesha. Emva kwenkululeko yaseIndiya ngo-1947, iKolkata, eyayisakuba liziko lemfundo yanamhlanje lamaIndiya, isayensi, inkcubeko kunye nezopolitiko, yahlupheka ngenxa yamashumi eminyaka yoqoqosho oluzinzileyo. Njengomnxibelelanisi we-19 ukuya ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 yeBengal Renaissance kunye neziko lenkolo kunye neendlela zokuziphatha ezahlukileyo zenkcubeko e-Bengal naseIndiya, iKolkata inezithethe zalapha kwidrama, ubugcisa, ifilimu, iqonga lemidlalo yeqonga kunye noncwadi. Uninzi lwabantu baseKolkata-phakathi kwabo, abantu abaninzi abarhola i-Nobel-banegalelo kubugcisa, kwisayensi nakwezinye iindawo. Inkcubeko ye-Kolkata ineempawu zentsingiselo ebandakanya abamelwane abasondeleleneyo (iiparitha) kunye notshintshiselwano ngengqondo yomfundi wetrimia (isongezelelo). Isabelo seWest Bengal kumzi-bhanyabhanya waseBengali usekwe esixekweni, ukwabamba amaziko enkcubeko abalulekileyo ngokubaluleka kwesizwe, njengeAkhademi yezobuGcisa, iSikhumbuzo saseVictoria, uMbutho waseAsia, iMyuziyam yaseIndiya kunye neLayibrari yeSizwe yaseIndiya. Phakathi kwamaziko obuchule kwezenzululwazi, iKolkata ibamba iAgri Horticultural Society yaseIndiya, iGeological Survey yaseIndiya, iBotanical Survey yaseIndiya, iCalcutta Mathematicsical Society, i-Indian Science Congress Association, iZoological Survey yaseIndiya, iZiko leeNjineli, iAnthropological. Uphando lwaseIndiya kunye noMbutho wezeMpilo yoLuntu waseIndiya. Nangona esekhaya kwiindawo eziphambili zekhilikithi kunye neefriday, iKolkata yahlukile kwezinye izixeko zaseIndiya ngokugxila kwibhola ekhatywayo nakweminye imidlalo.